လူသားတွေကို တွေးစရာတွေ ကျန်ခဲ့စေမဲ့ ပညာရှင် တွေရဲ့ တီထွင် မှုများ •
တီထွင်မှု တွေဆိုတာ လူသားတွေ ကို ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စဖေို့ပဲလေ….ဒါပေမဲ့လဲ့ တခြားသော တီထွင် ဖန်တီးမှုတွေက လူတွေကို တွေးစရာတွေ ကျန်ခဲ့စေပါတယ် ။ အဲ့လိုမျိုး တွေးစေရမဲ့ မေးခွန်း ထုတ်စေရမဲ့ တီထွင်မှု တွေကို ဖော်ပြ သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ လေအေးပေး စနစ်ပါဖိနပ် …. နာမည်ကြားတာနဲ့ တင် အရမ်းတွေ မိုက်နေပါပြီ….ဒါပေမဲ့ Hydro နည်းပညာ မပါပဲ ဖိနပ်မှာ အပေါက်တွေ ပါတဲ့ ဖိနပ် ဆိုတာကိုရော သိရဲ့လား ။ အပေါက်အပြဲ ပါတဲ့ ဂျင်ဘောင်ဘီကို ပရိသတ်ကြီးလဲ သိမှာပါ။
အဲ့ ဘောင်ဘီးတွေက ဈေးလဲ ပိုကြီးတာကို ပရိသတ်ကြီး သိမှာပါ…အဲ့ အစား ဘာလိုများ ရိုးရိုးဈေးသက်သာတဲ့ ဂျင်ဘောင်ဘီ ဝယ်ပြီး အပေါက်တွေ အပြဲတွေ လိုက်မလုပ်တာလဲ….ကိုယ်ကြိုက်ရာ နေရာ မှာတောင် ဖောက်နိုင်သေး ။ အရင်တုန်းက ဆိုရင် New Year အတွက် မျက်မှန်တွေ ထုတ်ခဲ့ ပေမဲ့ ခုချိန် မှာတော့ ဘာလို့ မထုတ်တော့ တာလဲဆိုရင် ၂၀၀၁ ၂၀၀၂ တို့လိုမျိုး သုည နှစ်လုံး မပါ တော့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာလိုများသူတို့တွေ ဆက်မထုတ်တော့လဲ ပရိသတ်ကြီးလဲ သိချင်မိမယ် ထင်ပါတယ် ။
အလယ်မှာ သုည မပါတော့ ဘယ်လိုလုပ်ဝ တ်မလဲ….. ။ ကြိုးသိုင်း ဖိနပ်ကို ခြေအိတ်နဲ့ ဝတ်တယ်ဆိုတော့……စဉ်းစားလေးနက်လေ ပါပဲ ။ ပုံမှာ တွေ့တဲ့ မျက်မှန်အတိုင်း တကယ်ကြီးဝတ်မှာလား….ကိုယ်မြင် ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကွယ်ပြီး Style ကျခြင်တယ် ပေါ့ ။ အခုဖော်ပြသွားတာတွေအပြင် တခြားသော လူတွေ တီထွင်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဘာလိုများ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရာတွေ အများကြီး ကျန်ပါ သေးတယ် ။ အဲ့အတွက် ပရိသတ်ကြီးကို ပုံအနည်းငယ မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
လူသားတှကေို တှေးစရာတှေ ကနျြခဲ့စမေဲ့ ပညာရှငျ တှရေဲ့ တီထှငျ မှုမြား
တီထှငျမှု တှဆေိုတာ လူသားတှေ ကို ခတျေမှီ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ စဖေို့ပဲလေ….ဒါပမေဲ့လဲ့ တခွားသော တီထှငျ ဖနျတီးမှုတှကေ လူတှကေို တှေးစရာတှေ ကနျြခဲ့စပေါတယျ ။ အဲ့လိုမြိုး တှေးစရေမဲ့ မေးခှနျး ထုတျစရေမဲ့ တီထှငျမှု တှကေို ဖျောပွ သှားမှာဖွဈပါတယျ ။ လအေေးပေး စနဈပါဖိနပျ …. နာမညျကွားတာနဲ့ တငျ အရမျးတှေ မိုကျနပေါပွီ….ဒါပမေဲ့ Hydro နညျးပညာ မပါပဲ ဖိနပျမှာ အပေါကျတှေ ပါတဲ့ ဖိနပျ ဆိုတာကိုရော သိရဲ့လား ။ အပေါကျအပွဲ ပါတဲ့ ဂငျြဘောငျဘီကို ပရိသတျကွီးလဲ သိမှာပါ။
အဲ့ ဘောငျဘီးတှကေ ဈေးလဲ ပိုကွီးတာကို ပရိသတျကွီး သိမှာပါ…အဲ့ အစား ဘာလိုမြား ရိုးရိုးဈေးသကျသာတဲ့ ဂငျြဘောငျဘီ ဝယျပွီး အပေါကျတှေ အပွဲတှေ လိုကျမလုပျတာလဲ….ကိုယျကွိုကျရာ နရော မှာတောငျ ဖောကျနိုငျသေး ။ အရငျတုနျးက ဆိုရငျ New Year အတှကျ မကျြမှနျတှေ ထုတျခဲ့ ပမေဲ့ ခုခြိနျ မှာတော့ ဘာလို့ မထုတျတော့ တာလဲဆိုရငျ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂ တို့လိုမြိုး သုည နှဈလုံး မပါ တော့တာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဘာလိုမြားသူတို့တှေ ဆကျမထုတျတော့လဲ ပရိသတျကွီးလဲ သိခငျြမိမယျ ထငျပါတယျ ။
အလယျမှာ သုည မပါတော့ ဘယျလိုလုပျဝ တျမလဲ….. ။ ကွိုးသိုငျး ဖိနပျကို ခွအေိတျနဲ့ ဝတျတယျဆိုတော့……စဉျးစားလေးနကျလေ ပါပဲ ။ ပုံမှာ တှတေဲ့ မကျြမှနျအတိုငျး တကယျကွီးဝတျမှာလား….ကိုယျမွငျ ရတဲ့ မွငျကှငျးကို ကှယျပွီး Style ကခြွငျတယျ ပေါ့ ။ အခုဖျောပွသှားတာတှအေပွငျ တခွားသော လူတှေ တီထှငျခဲ့ကွပမေဲ့ ဘာလိုမြား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ ရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှေ အရာတှေ အမြားကွီး ကနျြပါ သေးတယျ ။ အဲ့အတှကျ ပရိသတျကွီးကို ပုံအနညျးငယ မြှဝေ ပေးလိုကျ ပါတယျ ။